You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / To A Better Health Article Collection / Others / Chemotherapy
Chemotherapy နဲ့ ပတ်သက် သည့် ဗဟုုသုုတ
ဒီ ရေးသားချက် က လေး ကိုု ကျွန်မ အတိုုချုံး ပြီး ဘာ သာ ပြန် ပေး လိုုက် ပါ တယ်။
ကုုရိုုးကုုစဉ် ဆေးပညာ Conventional medicine အရ ဆိုု ရင် ကင်ဆာ လူနာ တွေ ကိုု chemotherapy နဲ့ ကုု ပေး ကြ ပါ တယ်။
လူနာ တွေ က လည်း နားမလည် သော ကြောင့် ဖြစ် စေ၊ အသက်ရှင် လိုု ဇော နဲ့ ဖြစ် စေ၊ ဘယ် လောက် ကုုန် ကုုန် ရှိ သမျှ အကုုန် ထုုတ် ပြီး ကုု လေ့ ရှိ ကြ ပါ တယ်။
သိုု့ ပါ သော် လည်း၊ ကင်ဆာ ရောဂါ နောက်ဆုုံး အဆင့် ရောက် နေ သူ များ ( terminally ill patients ) ကိုု chemotherapy နဲ့ ကုု တဲ့ အခါ မှာ အကောင်း ထက် အဆိုုး ဖက် ပိုု ပိုု ပြီး ဖြစ် စေ ပါ တယ် လိုု့ ပြော ပါ တယ်။
Chemotherapy ဟာ ကလာပ်စည်း တွေ ကိုု သေစေ တဲ့ အဆိပ် တွေ ဖြစ် တာ
ကြောင့် ၊ ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ မက ပဲ၊ ပုုံ မှန် ကလာပ်စည်း တွေ ပါ အဖျက်စီး ခံ ကြ ရ ပါ တယ်။
အထူး သဖြင့် မြန်မြန် ဆန်ဆန် သွက်သွက်လက်လက် ရှိ တဲ့ ကလာပ်စည်း တွေ
အထိခိုုက် ဆုုံး ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ ကလာပ်စည်း တွေ က တော့ ----
၁. ရိုုးတွင်း ချဉ်ဆီ ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ သွေးဥနီ၊ သွေးဥဖြူ၊ သွေဥ မွှား များ ဖြစ် ကြ ပါ တယ်။
ဒါ ကြောင့် လဲ chemotherapy ရ တဲ့ လူ များ သွေးသွင်း ရ ခြင်း၊ သွေးအား ပြန် ကောင်း လာ ရ အောင် ဆေး ထိုုး ရ ခြင်း၊ သွေးထွက် လွန် ခြင်း စ သည် တိုု့ ဖြစ် တတ် ကြ ပါ တယ်။
၂. အစာလမ်းကြောင်း မှာ ရှိ တဲ့ ကလာပ်စည်း တွေ
၃. မျိုးဥ ထွက် သော သားဥ အိမ် များ
ကင်ဆာရောဂါ နောက်ဆုုံး အဆင့် ရောက် နေ သူ များ ကိုု ဒီ အဆိပ် တွေ နဲ့ ကုု မယ် ဆိုု ရင် 27% ဟာ စောစော သေ သွား တတ် ကြ ပါ တယ် လိုု့ ဆိုု ပါ တယ်။
“The majority of the cancer patients in this country die because of chemotherapy, which does not cure breast, colon or lung cancer.
This has been documented for overadecade and nevertheless doctors still utilize chemotherapy to fight these tumors,” said Dr. Allen Levin, MD, author of The Healing of Cancer.
Clinical Oncology in December 2004 မှာ ဘာ ပြော ထား သ လဲ ဆိုု တော့ chemotherapy ဟာ ကုု ထုုံး တစ်ခုု ဖြစ် ပါ သော် လည်း ကင်ဆာ တွေ မျိုးစုုံ အတွက်5year survival success rates က တော့ 2% ပဲ ရှိ ပါ တယ် တဲ့။
ဒီလိုု အဖြစ် မျိုး ကိုု မရောက် ရ အောင် -----
၁. ကင်ဆာ မဖြစ် ရ အောင် နေ ထိုုင် စားသောက် ပါ။
၂. ကင်ဆာ ဖြစ် လာ ပြန် ရင် လည်း ဥပါဒ် မပေး နိုုင် တဲ့ နည်း ကိုု ရွေး ချယ် သင့် ပါ တယ်။
ဒါ က တော့ VitaminD ဖြစ် ပါ တယ်။
ကျန်တာ တွေ က တော့ ဖတ် ကြည့် ကြ ပါ တော့ မိတ်ဆွေ တိုု့ ရေ။
ကင်ဆာ ကုု နေ စဉ် Vitamin D level ကိုု အကောင်းဆုုံး အနေ အထား မှာ မလုုပ် ထား ပေးရင် ဒီ ဆရာဝန် ရဲ့ တာဝန် မကျေ ဖူး လိုု့ လဲ ယူဆ နိုုင် ပါ တယ်။
ဒါ က တော့ ဆရာဝန် မလုုပ်ပေး လဲ ကိုုယ် ကိုုယ် တိုုင် လုုပ် ယူ လိုု့ ရ တဲ့ ကိစ္စ ဖြစ် ပါ တယ်။
“ Optimized vitamin D levels will work synergistically with virtually every other cancer treatment. There are over 830 peer reviewed scientific studies showing its effectiveness in the treatment of cancer. ”
ကျန် တာ က တော့ စိတ်ဝင်စား တယ် ဆိုုရင် ဖတ် ကြည့် လိုု့ ရ အောင် တင် ပေး လိုုက် ပါ တယ်။